Ahoana ny fametrahana rivotra amin'ny harato fiompiana
Ny indostrian'ny fiompiana dia indostria lehibe ary ny fampandrosoana ny indostrian'ny fiompiana dia tena tsara. Mino izahay fa mora sy tsy lafo ny fiompiana akoho, ka maro ny toerana azo isafidianana hiompiana akoho. Raha handeha amin'ny fiompiana, matetika izy ireo dia misafidy ny hampiasa bree...
Ahoana ny fametrahana harato fiompiana vorona araka ny tokony ho izy
Amin'izao fotoana izao, ny anti-birdnet dia vokatra ampiasaina matetika kokoa, ary ny fahombiazany dia tsara amin'ny lafiny samihafa. Ohatra, izy io dia manohitra ny fahanterana ary manana tanjaky ny tensile avo, fanoherana ny hafanana ary ny fanoherana ny rano. Satria ireo vokatra ireo dia ampiasaina amin'ny toerana samihafa, izy ireo ...
Fandrakofana harato alokaloka
Izao no taonan'ny teknolojia avo lenta. Betsaka ny vokatra ampiasaina amin'ny fambolena, ary anisan'izany ny harato misy masoandro. Ny fampiasana harato masoandro dia manome fahafaham-po maro ho an'ny mpampiasa, ary ny tombony amin'ny harato masoandro dia misy ny fanoherana ny harafesina. Mahatohitra taratra sy maivana. Sy izaho...
Amin'izao fotoana izao, maro ny vorona mangalatra sakafo, saingy raha mbola lehibe ny fiantraikan'ny halatra goavana, dia mamolavola harato vorona ireo mpandray anjara mba hamahana ny toe-javatra toy izany. Noho ny tontolon'ny fampiasana samihafa, ireo karazana harato vorona a...